مؤتمر عن بعد wuxuu jirey sanado badan. Tan iyo wax ka badan hal qof ayaa ku jiri kara line، dadku waxay adeegsadeen taleefan si ay kulamo ula yeeshaan midba midka kale. Ujeedooyinka dhisida akhristaha internetka، teleconferencing waxaa loo isticmaali karaa soo jiidashada dhagaystayaasha، muujiya khubarada iyo saar astaantaada dadka hortooda oo aan laga yaabo inay maqlaan ganacsigaaga.
Waxaan hore uga wada hadalnay siyaabo kala duwan oo akhristayaasha loogu soo jiidho degelkaaga، oo ay ku jiraan adeegsiga Sheekooyinka Twitter iyo kooxaha xayeysiinta. عقد المؤتمرات عن بعد-كا وا واكسوجا كا دوان ألاداها websaydhka ، maxaa yeelay adigu kuma lihid waxyaabaha muuqaalka ah ee aad ku haysan lahayd weelka webinar، kaas oo ah kulan fiidiyow ah.
Samee wareysiyada oo ku dhaji khadka tooska ah. Waxaan marmar ku sameeyaa tan kafee kafee leh qorayaasha، anigoo adeegsanaya Blog Talk Radio Radio. Waqtiyadi hore، waxaan adeegsan jiray wicitaanada shir، duubista fadhiyada، waxaanan ku wada waraysiyo lala yeeshay qorayaal dhowr ah.
Wicitaanada tababarka hal-hal آه.
1.1 Wicitaan Wadaag آه
1.4 Wicitaanada Guud ee Bilaash آه
2 سامي شاشدة غول
3 قار دور أه
4 حولة كالي اي أفنيو للترقية
Wicitaan Wadaag آه
FreeConferenceCall.com ودا أديب بدانة isticmaalay. Waxay soo bandhigaan wicitaannada 100٪ bilaashka ah. Waad duubi kartaa wicitaanadaas oo mar dambe waad kala soo bixi kartaa. Astaamaha kale waxaa ka mid ah:
Haddii aad u baahato adeegyo shaashadda، shirkadan ayaa sidoo kale ku siinaysa dadka xitaa 25 lacag la’aan oo lacag la’aan ah.
Waad socodsiin kartaa shir nololeed، oo la mid ah raadiyaha raadiyaha.
Anigu shaqsi ahaan waxaan u helay adeeggan inuu yahay mid aad u la isku halleyn karo oo aan xasillooni lahayn، xitaa markii laygu qasbay inaan isticmaalo taleefanka gacantu، oo loo tixgeliyo ‘maya’ maya moda-moda ‘مايا’.
Igu soo biir waa xulasho kale oo loogu talagalay telonferencing. Waxaad ka heli kartaa wadahadal aan xad lahayn oo leh nidaamkan. Waxay kaliya wacaan lambarka aad siiso iyaga oo galaan aqoonsiga 9 -ititit. Tani sidoo kale waa hab weyn oo lagu xaddido tirada dadka ku biiri kara shirkaaga. Waxaad bixisaa aqoonsiga oo keliya kuwa aad doonayso inaad kaqaybqaadato.
Lama adeegsado software-yada
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa telefoonka gacanta ama iPad si aad u martigeliso shirarka gacanta.
Sida inta badan kuwan ka mid ah nidaamka wicitaanada، qaab-dhismeedka qiimaha ayaa ku jira miisaan hoos loogu dhigo ka-qaybgalayaasha intooda badani ay lug ku leeyihiin. Wixii wadahadal codka ah، waxaad u baahan doontaa xisaabta Pro، oo ka bilaabanta $ 20 / bishii waxayna ka socotaa halkaa.
UberConference Waxay bixisaa qaar ka mid ah astaamaha wanaagsan ee kaa caawiya sidii aad u eegi lahayd sida xirfadlaha aad tahay. Adigoo isticmaalaya kombiyuutarkaaga iyo taleefankaaga، waxaad si fudud u lumi kartaa wicitaanada qaylada (waxaad ogtahay، midka leh eeyga oo yareeya asalka)، ama ku dar qof kale، sida martida.
Waxaad u rogi kartaa webinar adiga oo wadaagaya shaashadaada، sidoo kale، haddii taasi ay tahay rabitaankaaga. مؤتمر UberConference ayaa sidoo kale bixisa awooda lagu arko qofka ku hadla halkii uu ku weydiin lahaa ama ku adkeysanayo codadka nambarka shakhsiga.
Haddii aad xadideyso wicitaanadaada 10، Markaa waxaad adeegsan kartaa adeeggan bilaash ah. Haddii kale waa $ 10 / bishiiba illaa ka qgbgalayaasha 100 waqti.
Wicitaanada Guud ee Bilaash آه
Wicitaanada Guud ee Bilaash ah waxay leedahay muuqaalo xiiso leh. Wicitaanada shirku waa u bilaash ka qaybgalayaasha 250، taas oo ah tan ugu badan adeeg kasta oo wicitaan ah. Waxaad ku bixin kartaa ilaa 10،000 hal wicitaan، laakiin waxay u badan tahay inay ugufiican tahay inaad xadiddo tirada oo aad keydiso dhowr baako (hoos fiiri). Waxaad sidoo kale heli doontaa:
Lambarka taleefoonka iyo taleefoonka loo isticmaali karo wicitaan kasta oo shirka ah. Tani way fiicantahay markaad haysato kaqaybgalayaasha isku midka ah ee kugu soo biiraya iyo sidoo kale sahlan inaad xasuusato.
Waxaa jira warar faahfaahsan oo ku saabsan wicitaanada، si aad u ogaato meesha horumarinta laga gaari karo shirarka mustaqbalka.
سامي شاشدة غول
Qoraal ku saabsan CIO waxaa qoray Esther Schindler، maamulaha horumarinta webka Gerry Mann waxay soo jeedisay qorshe horay loogu talagalay dhibaatooyinka tiknoolajiyadda adiga iyo dadkaaga soo waca ay dhici karto inta la ja shaira.
Haddaad rabto inaad waqtiga u gasho qorshaynta، kobcinta iyo marti-gelinta wicitaanka shir، waxaad u baahan tahay inaad ka hesho inta ugu badan ee aad ka heli karto. Marka lagu daro inaad haysatid macluumaad si aad wax uga eegto wakhtiga ka hor، waxaad u baahan doontaa inaad meeleejiso dhowr ilaalin.
Hayso isku-duwe kaa soo dhex geli doona oo sii wadi kara kulanka haddii ay dhacdo inaad khadka ka go’do. Isu-duwdu waa inuu lahaadaa qoraalkaaga iyo qoraaladaada iyo helitaanka buuxda ee barnaamijka kulankaaga si ay u aamusiso soo wacayaasha codka iyo inay qabato shaqada aad qaban lahayd haddii aad joogi laheyd. Sida iska cad، tani waxay u baahan doontaa qof aad si buuxda ugu kalsoon tahay.
Hadaad tegayso qoraal، tani waxay ku siineysaa daah fur deg deg ah shirka. U adeegso jaleec iyo gogo ‘si aad ugu dardar geliso warbaahinta bulshada. Haddii aad su’aal weydisay، isla su’aaalahaas Twitterka ku buuxi ka dibna lasocod oo u sheeg kuwa aad la socotid inay jawaabta ku heli karaan iyagoo soo dejinaya duubista telefishankaaga bilaashka ah.
La soco ka soo qeyb galayaasha munaasabadda oo weydii haddii ay jiraan wax su’aalo ah oo aysan dareemin in si buuxda looga jawaabay. Su’aalahaas uga jawaab boostada barta ku taal ama teleconference labaad.
قار دور أه
Mid ka mid ah faallooyinka am ha haqlo ama qaado kaliya inta Qof ee aad awoodo inaad lahadasho hal mar. Haddii su’aalo badan kaa cabsi geliyaan، waxaad u baahan tahay dadka inaad hore u soo dirto ka dibna naftaada aqri.
Hubi ka qaybgalayaasha inay fahmaan inay mas’uul ka yihiin qarashka masaafada dheer. Tilmaan in lambarka uusan ahayn lambarka 1-800. Haddii ay tahay lambarka 1-800، si taxadar leh u qaado qof walba oo wacaya.
U ogow dadku inaad ku dadaalayso inaad ku qorto shirka، laakiin ma jirto damaanad qad. Diiwaanada waxay noqon kartaa mid qaldan. Ama، adigoo ku cusub wicitaanada shirarka، waxaad shaki ka qaadi kartaa diiwaanka kowaad ama laba.
الوقتي هور كو دق. Isu-soo-dubbarbardhig dhexdhexaadiyahaaga oo ku dhex mara qoraalka.
Xaqiiji in qolalka martida martidu ay awoodaan inay ka soo galaan khadka. U samee wakhti aad ku barato iyaga oo sidoo kale hubi inay si buuxda u fahmaan habka guud.
Hayso qorshe gurmad ah haddii ay dhacdo in khadadka taleefankaaga iyo / ama internetka ay hoos u dhacaan. Mar Baan ku qasbanahay inaan isticmaalo taleefanka gacantayda، xusuusnow؟ Taasi waa sababta oo ah xooggaygu wuu baxay. Waan sameeyey wixii igu qasbay. Ma ahayn wax ku habboon، laakiin way shaqaysay.
Shakhsi ahaan، waxaan si buuxda uga fogaan doonaa qorshe kasta oo iga doonaya inaan bixiyo kharashka soo diraha iyo daqiiqadaha ay isticmaalaan.
Qof kasta oo soo waca waa inuu mas’uul ka yahay kharashka masaafada u dheer. Tani dhab ahaantii ugu wanaagsan da’da dadka badankoodu leeyihiin ugu yaraan masaafo dheer oo ay isticmaali karaan taleefannada gacanta. Haddii kale، haddii aad bixiso adeega 800، waxaad dabeyli kartaa lacag bixinta qof kasta oo soo waca oo runtii u cuni karai kara miisaaniyadda guud ee guud.
حولة كالي اي أفنيو للترقية
Waxaa jira dad aan iyagu dareensaneyn in wicitaanada shirku ay aad u guuleystaan.
Sida noocyada badan ee dalacsiinta، waxyaabaha qaarkood si fiican ayey ugu shaqeeyaan qaarna uma shaqeeyaan kuwa kale. Hadafkeygu waa inaan ku soo bandhigo fikrado kala duwan، qiimo jaban oo aad isku dayi karto. Kuwo badan oo iyaga ka mid ah ayaan naftayda tijaabiyey oo aan ugu yaraan xoogaa guulo ah iyo ra’yi-celin togan laga helay. Haddii kale، waxaa jiri kara kuwo kale oo si guul leh isugu dayay. Waa caqli xaddidan tahay in la xaddido maalgashiga lacageed illaa aad ka aragto sida ugu wanaagsan ee xayeysiinta gaarka ahi ay kuugu shaqeyso adiga iyo astaantaada. Si kastaba ha noqotee، inaad kubixiso shir marka tartamadaagu aanu kaliya kaa hor marin ee aad ka dhigto koobab iyo xuduudo.